Shariif Xasan iyo xildhibaanno taageersan oo la filayo in ay xarun ka dhigtaan Jabuuti ama Eritereya, Madaxweyne Yuusuf oo la filayo in uu dhawaan dib u dhigo doorasho la filayay in ay xildhibaanada taageersan ku doortaan guddoomiye cusub kadib markii culeys kaga yimid beesha caalamka, Wasiirada arimaha dibadda EU-da oo Isniinta ka shiraya sharci darrada lagu casilay guddoomiye Shariif iyo ammaan darrada Xamar oo ka sii dartay. Ruunkinet 21/01/07
Wararka ka immanaya Villa Soomaaliya ayaa ku waramaya in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in dib loo dhigo in ay doortaan mudanayaasha baarlamaanka guddomiyaha golaha baarlamaanka si loo bedelo guddoomiye Shariif Xasan.
Warkan oo aan la xaqiijin ayaa tibaaxaya in kadib markii culeys weyn madaxweynaha kaga yimid beesha caalamka oo ku saabsan sharci darradda xilka looga qaaday guddoomiye Shariif Xasan ayaa la sheegay in uu dhawaan madaxweynaha ku amri doono xildhibaannada jooga Baydhabo in ay yara sugaan doorashada ay doonayaan in ay ku doortaan guddoomiye cusub.
Col. Yuusuf oo ay awooddiisu ku xiran tahay joogitaanka ciidamada Itoobiya ee qabsaday koofurta Soomaaliya ayaa la sheegay in beesha caalamka ay ku tilmaantay dambi laga galay dastuurka qaranka kadib markii xilka laga qaaday guddoomiye Shariif Xasan.
Shariif Xasan iyo xildhibaanno kale oo mucaarad ah isla markaana ay dhibaato ka haysato sidii ay u tegi lahaayeen Soomaaliya ama Kenya oo horay uga erisay dalkooda ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay xarun ka dhigtaan dalka Jabuuti ama Eritereya.
Dhanka kale, wasiirada arrimaha dibadda ee EU-da ayaa la sheegay in berrito oo Isniin ah ay kulan ku yeelan doonaan Brusels oo ah dalka Belguim.
Wasiiradan ayaa la sheegay in ay ka xaajoonayaa sidii ay ka yeeli lahaayeen sharci darrada xilka looga qaaday guddoomiyaha baalamaanka.
Sidoo kale, wasiiradan ayaa la filayaa in ay joojiyaan 60 milyan oo ay deeq u sii lahaayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, ammaan darrida magaalada Muqdisho ayaa sii koradhay maalmihii la soo dhaafay kadib markii weeraro joogta ah loo geystay ciidamada Itoobiya iyo kuwa taageersan Prof. Cali Maxamed Geedi iyo Col. Cabdullahi Yuusuf.
Ciidamada huwanta ee isugu jira Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa la sheegay in ay dileen in kabadan 50 ruux oo rayid ah dhorkii usbuuc ee la soo dhaafay.
Cabdullahi Xuseen. Ruunkinet, London